तपाईको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी त छैन ? प्राधिकरणले काट्न थाल्यो लाईन ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > तपाईको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी त छैन ? प्राधिकरणले काट्न थाल्यो लाईन !
तपाईको विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी त छैन ? प्राधिकरणले काट्न थाल्यो लाईन !
काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशन बमोजिम पहिलो चरणमा महसुल नबुझाउने ठूला ग्राहकको लाइन काटेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हिजो ३७ लाख ३१ हजार ३३१ रकम बक्यौता रहेको महेन्द्र मञ्जिल, १० लाख १० हजार बक्यौता रहेको कमला दुगड र छ लाख ६३ हजार बक्यौता रहेको शारदा शेरचनको लाइन काटिएको हो। प्राधिकरणको ३१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री शर्माले बक्यौता असुल उपर गर्ने र अटेर गर्ने जो कोहीको पनि लाइन काट्न दिएको निर्देशनअनुसार नै लाइन काट्न सुरु गरिएको हो ।
यस्तै अत्तरीया क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका १४ ग्राहकको लाइन काटिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार युनाइटेड टेलिकमसहित १० ग्राहकको नौ लाख १८ हजार ८५२ बक्यौता रहेको छ। त्यस्तै डोटीका १० ग्राहकको लाइन काटिएको छ। सो जिल्लामा एक लाख ६४ हजार ४९५, डडेल्धुराका १० ग्राहकको तीन लाख २९८ बक्यौता रहेको छ। दार्चुलाका १० ग्राहकको तीन लाख २४ हजार १९५, बैतडीका १० ग्राहकको चार लाख ६६ हजार, महेन्द्रनगरमा १३ लाख ४१ हजार ४२६ बक्यौता रहेको छ । ती क्षेत्रीय कार्यालयको कुल रु ४६ लाख ३९ हजार ६०४ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले मुलुकभरि १० अर्बको हाराहारीमा बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। त्यसमा तीन अर्ब मात्रै सडक बत्तीको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ।
६ भदौ २०७३, ११।००
२०७३ भदौ ६ गते १३:०३ मा प्रकाशित
इनभेष्टमेन्टले ल्यायो अफरै अफर, ४१ प्रतिशत लाभांश, २० प्रतिशत बोनस
गहना जोड्ने हैन त ? घट्यो सुनको भाउ !
नेसनल लाइफले १४.५% लाभांश दिने
सरकारद्वारा अबदेखि माछा मार्न प्रतिबन्ध !
विद्यार्थी सवैभन्दा बढी नेपालीमै कमजोर
नेप्से सुचक र कारोवार रकम दुुबै घटे
बाग्लुङमा वार्षिक ३५ करोडको मासु आयत